उफ् फेरि अायो यस्तो कन्पारो तताउने समाचार, २ जेठाजुबाट बुहारी बलात्कृत… – PathivaraOnline
Home > समाचार > उफ् फेरि अायो यस्तो कन्पारो तताउने समाचार, २ जेठाजुबाट बुहारी बलात्कृत…
उफ् फेरि अायो यस्तो कन्पारो तताउने समाचार, २ जेठाजुबाट बुहारी बलात्कृत…
admin September 27, 2018 समाचार 0
धादिङ, असोज ११ । बुहारी बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जेठाजु पक्राउ परेका छन । जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिका ११ की २२ बर्षीया बुहारीलार्ई बारम्बार बलात्कार गरेको अरोपमा ३५ बर्षीय र २९ बर्षीय दुई जेठाजुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । आफुलाई दुई बर्षदेखि बलात्कार गरेको भन्दै पीडित महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि धादिङ प्रहरीले आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेको हो । यसरी २ जेठाजुले बुहारी बलात्कार गरेका छन् ।
पछिल्लोपटक माइलो जेठाजुलाई यही असोज ५ गते तथा जेठो जेठाजुलाई गत साउन २८ गते बलात्कार गरेको पीडित बुहारीको भनाई छ । आफुलाई बलात्कार गर्न अरु मानिसहरुलाई समेत पठाएको पीडितको आरोप छ । अन्याय सहन नसकेर अन्नतः आफु न्यायका लागि गुहार्न आएको उनले बताएकी छिन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
बलात्कारको गलत रिपोर्ट दिने २ डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकार?
पुलिसको बर्दीको आडमा एसपी बिष्टको कर्तुत: बिष्टलाइ पक्राउ गर्न दबाब दिन सबैले शेयर गरौं !
कृष्णनगरमा हिन्दू र मुस्लिम समूदाय बीच झडप
सिमामा तारबार लगाउनु मधेसी जनताकाे हितकर छैनः महेन्द्र यादव
बुहारीलाई पहिलो पटक देखेर सासु बे’होस्, होस खुलेपछि निकालिदिइन् बाहिर , के हो यस्तो अनौठो कारण ?